चर्चित बलिउड अभिनेत्रीहरु-जसले आफ्नो भि’त्रीव’स्त्र लगाउनै भुले ! – Jagaran Nepal
चर्चित बलिउड अभिनेत्रीहरु-जसले आफ्नो भि’त्रीव’स्त्र लगाउनै भुले !
Jagaran Nepal बिहिबार, आषाढ २५, २०७७
एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्रीहरूका साथ वार्डरोब मालफंक्शन हुनु सामान्य कुरा हो । तर, कयौ पटक यस्तो अवस्था देखियो जब कुनै पनि नायिकाका लागि लज्जाको विषय हो ।बलिउडका सुन्दरीहरु महत्वपूर्ण समयमा सबैभन्दा आवश्यक वस्त्र लगाउन भुले ।
तर, उनीहरु क्यामेराको आँखाबाट बच्न भने सकेनन् ।केही यस्तै तस्वीरहरु यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यो सूचीमा यसमा तनिषा मुखर्जी, याना, सोनाली बेन्द्रे, प्रिति झांगियानी, नीतु चन्द्रा, कंगना रनोट, आलिया भट्ट, शिल्पा शेट्टी, सोफिया हयात छन् ।त्यो कथा २०६८ सालको मधुपर्कमा प्रकाशित भयो ।
छापिनुअघि यति धेरै प्रतिक्रिया आउला भन्नेचाहिँ लागेको थिएन । नकारात्मकभन्दा सकारात्मक प्रतिक्रिया बढी पाएँ । स्वयं मनु ब्राजाकीले ‘महिलाले महिलाका पक्षबाट कसैले यो कथा लेखोस् भन्ने चाहेको थिएँ, तपाईंले लेख्नुभयो । तपाईंलाई धन्यवाद र बधाई छ ।’